कस्तो थियो गोरे र सनमको सम्बन्ध ? गोरे भन्थे– सनम ! तिम्रा लागि जे नि गर्छु
सनमकी श्रीमती सुनिता भन्छिन्– यतिसम्म होला भन्ने सोचेकी थिइनँ
२०७५ जेठ ९ बुधबार १०:११:००
साढे ३३ किलो सुन तस्करीसँग जोडिएपछि हत्या गरिएका सनम शाक्य (बायाँ) र मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरे (दायाँ) । तस्बिर सौजन्य : सनमको परिवार
काठमाडौं । ‘विगत अढाई वर्षदेखि सबै काम सनमले गथ्र्यो । सामान हरायो भन्ने सुनेँ, त्यसबेला म कोलकतामा थिएँ । त्यसपछि विमानस्थलका स्टाफलाई सोधियो । सुन खोज्न हिँडियो । खोज्दै जाँदा म भएको भए सनम मर्दैनथ्यो होला । खानपिन झैझगडा भइरहन्थ्यो । सनम मर्ने बेलामा गाडीमा राखेर उनीहरुलाई घरपरिवार र हस्पिटलमा छाड्ने तयारी थियो । हामी वर थियौं । अन्तिममा सनम मर्यो भन्ने खबर आयो । त्यसपछि हामी आत्तियौं,’ पक्राउ पर्नुअघि चूडामणि उप्रेती अर्थात् गोरेले यस्तो भनेको भिडियो सन्देश सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा गोरेले सनमको बारेमा निकै कुरा बताएका छन् ।
कस्तो हो त सम्बन्ध ?
गोरेले पनि माया गर्थे सनमलाई
सनमको परिवारका सदस्यका अनुसार पहिले गोरेले पनि सनमलाई निकै माया गर्थे । उनी गोरेसँगै दुबई पनि गएका थिए, जहाँ गोरेको परिवार पनि थियो ।
सुन हराएपछि हत्या
गत माघ पहिलो साता युएईबाट आएको तस्करीको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि सबै विषय छताछुल्ल भएको थियो । उक्त सुन खोजी गर्ने क्रममा सनम शाक्यको हत्या भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
सनमको परिवारले गोरेकै यातनाले नै सनमको मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ ।